Imisebenzi yezandla eyi-10 yangempela futhi emnandi yezingane zesikole sabaqalayo | Imisebenzi yezandla ivuliwe
Imisebenzi yezandla eyi-10 yezingane zesikole sabaqalayo
Ukuze bakwazi ukukhipha imicabango yabo ngenkathi bethuthukisa amakhono amasha nokufunda, kulokhu okuthunyelwe uzothola Imisebenzi yezandla eyi-10 yezingane zesikole sabaqalayo Okufanele ukwenze ngamakhadibhodi, irabha ye-eva, amabhaluni, ukhuni noma uboya nokuthi abancane bangakusebenzisa ngokunenzuzo ukukuyisa esikoleni nokuzijabulisa nofunda nabo.
1 Amacala Wokwezifiso
2 Umhleli wepensela
3 Amaqhawe amakhulu enziwe ngamakhadibhodi
4 Izicathulo ezinyaweni zeDinosaur
5 Isikebhe ngokumelene nesithukuthezi
6 Ama-binoculars anemiqulu yamaphepha asendlini yangasese
7 Amabhaluni omlingo
8 Ubuciko bokufunda ukubopha izintambo zezicathulo
9 Qonda ukwahlukana ngendlela elula
10 Isikhwama sokugcina ijeli
Ngeso elibhekele uSepthemba futhi elibheke ukuqala konyaka omusha, izinsuku zokugcina zehlobo zingasetshenziswa ukulungisa izinto izingane ezizodinga ukuzisebenzisa ekilasini.
Ukuze kusungulwe isibopho esijabulisayo ngokubuyela esikoleni, ukuze kungabizi mali enkulu kangako ukubuyela enkambisweni bese bekubona kuyinto emnandi, lokhu omunye wemisebenzi yezandla ebanda kunazo futhi elula yezingane zesikole sabaqalayo ongayenza ngazo: amacala enziwe waba negama lawo afekethisiwe ngesandla.
Ukwenza lo msebenzi wobuciko, uzodinga: amakesi okugqekeza (indwangu ekahle yemigodi yayo emikhulu yezingane efekethisiwe), izinaliti zepulasitiki, intambo enemibala nepensela ukudweba endwangwini uhlaka oluzolandelwa yingane njengesiqondisi intambo nenaliti.
Ungathola imininingwane ethe xaxa mayelana nokuthi ungenza kanjani amacala aqondene nawe kokuthunyelwe Amacala afekethisiwe ngesandla, abuyele esikoleni!
Enye yezandla ezilula ezinganeni zesikole samabanga aphansi ongazenza umhleli wepensela omuhle owenziwe ngezinto ezenziwe kabusha. Lo msebenzi wobuciko uphelele kwabancane ukuze bathuthukise ubuhlakani babo ngasikhathi sinye lapho belungisa zonke izinto zesikole abazodinga isifundo esilandelayo.
Izingane zivame ukuqoqa inani elikhulu lamapensela, omaka, amakhrayoni, namapeni. Imvamisa bagcina bexubekile futhi badidekile kunoma yiliphi ibhokisi elizungeze indlu, kepha indlela engcono yokuziqoqa futhi uzisebenzise edeskini lakho ukuzibeka ngaphakathi komhleli wepensela.
Kuthiwani uma izingane zakha eyodwa ngezandla zazo? Ukuze wenze lo msebenzi wobuciko ngeke udinge ukuthenga noma yini ezincwadini zokubhala ngoba kungenziwa ngezinto osunazo vele ekhaya: imiqulu emibili yamakhadibhodi yamaphepha asendlini yangasese, izinti ze-ayisikhilimu, amakhadibhodi, itheyiphu emaceleni amabili, omaka, isikele, ipensela kanye nebhebhoni.
Uma ufuna ukubona inqubo ephelele yokwenza lo mhleli wepensela, ungaphuthelwa okuthunyelwe Imbiza yomhleli wepensela wezingane lapho unezinyathelo zonke.
Amakamelo endlu encane kunazo zonke akhombisa ubuntu bawo nezinto azithandayo. Uma uthanda amaqhawe amakhulu, ngiphakamisa lo msebenzi wobuciko ngamaroli amakhadibhodi asetshenzisiwe lapho ungakhiqiza khona abalingiswa bakho obathandayo ngopende omncane we-acrylic kanye namabhulashi athile. Ngenye yezandla ezilula ezinganeni zesikole sabaqalayo, ezingazenza zodwa ukuhlobisa amakamelo azo.
Ungakhetha phakathi kukaSuperman, Batman, Spiderman ... noma ubenze bonke! Ukwenza lawa maqhawe amakhulu uzodinga kuphela amashubhu amakhadibhodi ephepha lasendlini yangasese, upende we-acrylic onemibala, isikele, uphawu olumnyama olucekeceke kahle, ipensela, amabhulashi athile awugqinsi futhi mancane, ucezu lwamakhadibhodi abomvu namnyama nesibhamu seglue esishisayo. .
Eposini Amaqhawe amakhulu enziwe ngamakhadibhodi Uzokwazi ukuthola zonke izinyathelo futhi uzobona ukuthi kushesha futhi kulula kangakanani ukwenza lo msebenzi wobuciko. Bazojabula ngomqondo!
Izicathulo ezinyaweni zeDinosaur
Wake wacabanga ngomdlalo amabhokisi ambalwa wezicubu anganikeza wona ukwenza ubuciko bezingane zesikole sabaqalayo? Ngakho-ke bheka lo mbono ngoba ungenza ezinye izicathulo ezimnandi ngokuma kwezinyawo ze-dinosaur ukuze abancane bagqoke.
Awudingi izinto eziningi zokwakha lo msebenzi wobuciko, mhlawumbe uneziningi zazo ekhaya (amabhokisi amabili angenalutho wezicubu, isibhamu seglue esishisayo, ipensela nerula) futhi ungahle udinge kuphela ukuthenga amakhadi aluhlaza kanye nombala wegolide izitika.
Ukubukeka kwezinyawo zedayinaso, vele umboze izinhlangothi zebhokisi lezicubu ngezingcezu zekhadibhodi eliluhlaza. Ngemuva kwalokho kufanele wenze ukwakheka kwezipikili futhi ekugcineni uhlobise amabhokisi ngezitika zegolide. Uma ufuna ukwazi yonke inqubo ngokuningiliziwe, bona okuthunyelwe Izicathulo ezinyaweni zeDinosaur.
Isikebhe ngokumelene nesithukuthezi
Lena enye ye ubuciko obusheshayo bezingane zamabanga aphansi ongazenza. Ilungele lezo zikhathi lapho izingane zinesithukuthezi njengama-oysters futhi zingazi ukuthi zenzeni ukuze zijabulise. Lona kanye igama lomsebenzi wezandla lithi: isikebhe sokulwa nesithukuthezi.
Yini oyodinga? Ibhodlela nje, ingilazi noma imbiza yensimbi enesembozo (esingenamaphethelo abukhali futhi sibanzi ngokwanele ukuthi singangena futhi sikhiphe amaphepha anemibono emelene nesithukuthezi) amanye amaribhoni okuyihlobisa, iphepha, umaka nesibhamu esishisayo seglue.
Uma ufuna ukwazi yonke imibono ongayibhala ebhodleleni, chofoza kokuthunyelwe Isikebhe ngokumelene nesithukuthezi ukuthola.
Ama-binoculars anemiqulu yamaphepha asendlini yangasese
Izingane ezinesibindi kunazo zonke zizokwazi ukukhipha imicabango yazo ngokwenza ezinye izibonakude zamakhadibhodi okuphuma ngazo ukuhlola umhlaba.
Lesi ngesinye sezinto zobuciko ezilula futhi ezingadli isikhathi ezinganeni zesikole samabanga aphansi ukuze zidlale nazo zisuka. Ngaphezu kwalokho, abancane bangabenza ngezifiso njengoba bathanda kakhulu.
Ukuze wenze la ma-binoculars kufanele uthole amabhokisi amabili emarolliphepha asendlini yangasese, amanye amapheshana amancane ekhadi elinemibala, intambo, iglu, isikele, umshini wokuprinta amaphepha kanye nezimpawu noma i-tempera ukupenda amakhadibhodi.
Uma ufuna ukuthola inqubo yokwenza lezi zibonakude ezijabulisayo, ungaphuthelwa okuthunyelwe Ama-binoculars anemiqulu yamaphepha asendlini yangasese kwalabo abasebenza kakhulu.
Amabhaluni omlingo angenye yezandla zezingane zesikole sabaqalayo azijabulela kakhulu inqubo yokwenza. Izinto zokwakha zitholakala kunoma iyiphi i-bazaar futhi ngeke kukuthathe isikhathi eside ukuzenza. Ngaphezu kwalokho, zilungele izipho nokuthi izingane zizijabulise isikhashana zizikhame ngezandla zazo futhi zibone ukuthi ziphetheni ngaphakathi.
Uma kwenzeka ufuna ukulungisa amabhaluni omlingo uzodinga kuphela amabhaluni asobala futhi anemibala, i-mesh eqinile enezimbobo ezinkulu, i-glitter esesimweni sezinhliziyo noma zezinkanyezi, ezinemibala nezincane ze-gel orbits, ucezu lwentambo yokuhlobisa, iminsalo emibili yemibala ukuhlobisa, ibhande lenjoloba ukubopha i-mesh, imbiza enamanzi, isikele kanye nofele.
Ukuze ungaphuthelwa yiziphi izinyathelo kulo msebenzi, ungabuka ividiyo oyothola kokuthunyelwe. Amabhaluni omlingo, ezochaza inqubo ngokuningiliziwe.
Ubuciko bokufunda ukubopha izintambo zezicathulo
Yize kuliqiniso ukuthi izicathulo zezingane eziningi zine-velcro noma amabhakede ukuze ezincane zizigqoke ngokushesha, njengoba zikhula kubalulekile ukuthi zazi ukuthi zingabopha kanjani izintambo zezicathulo zazo, ikakhulukazi uma ziya esikoleni.
Ukuzilolonga, lokhu kungenye yezandla eziwusizo kakhulu ezinganeni zesikole samabanga aphansi ongazithola ngoba ngazo kuzokwenzeka funda ukwenza amaluphu ngaphakathi nangaphandle kwekhaya.
Izinto ozozidinga zingatholakala ekhaya: amakhadibhodi lapho ungadweba khona amateki, uboya obusebenza njengezintambo, isikelo, umaki kanye nokusika.
Ngabe ufuna ukubona ividiyo yokuthi lobu buciko benziwa kanjani? Chofoza kusixhumanisi sokuthunyelwe Ubuciko bokufunda ukubopha izintambo zezicathulo.
Qonda ukwahlukana ngendlela elula
Omunye wemisebenzi yezandla ewusizo kakhulu ezinganeni zesikole samabanga aphansi ongazenzela yona lena chaza ukuthi ungabala kanjani ukwahlukana kalula. Kuhle ukuthi lapho beqala ukufunda ukwahlukana ekilasini lezibalo ngoba bazokwazi ukuqonda kangcono ukuthi basebenza kanjani nokuthi benzelani.
Ukwenza lo msebenzi ungasebenzisa izinto onazo ekhaya njengekhadibhodi, inkomishi yeqanda, iphepha, amabhola noma imbewu, umsiki, isikele, iglu nomaka. Inqubo yokwenza kube lula kakhulu kepha uma ufuna ukubheka, ngikushiya isixhumanisi sokuthunyelwe lapho ungabona khona ividiyo ukuthola eminye imininingwane: Qonda ukwahlukana ngomsebenzi wobuciko.
Isikhwama sokugcina ijeli
Phakathi kobuciko bezingane zesikole samabanga aphansi ezikhona, lokhu kungenye yezingane ezizokwazi ukuzisebenzisa kusukela ngasikhathi sinye ukuthi ziyakujabulela ukukwenza, kuzoba wusizo esikoleni noma emisebenzini yangaphandle.
Kuzo isikhwama sokugcina ijeli ene-hydroalcoholic futhi uyiphathe ngesandla ulenga esikhwameni. Yenziwe ngenjoloba ye-eva nangamarivethi amancane ukuhlobisa ubuciko.
Lona ikakhulukazi unesimo sikaSpiderman, omunye wamaqhawe ayizintandokazi zabancane ngakho-ke bayokujabulela ukusebenzisana ekwakheni ubuciko. Uma ufuna ukubona inqubo yokuthi kwenziwa kanjani, kusixhumanisi esilandelayo uzothola ividiyo Isikhwama sokugcina ijeli.
Indlela ephelele ye-athikili: Imisebenzi yezandla ivuliwe » Yezandla » Imisebenzi yezandla yezingane » Imisebenzi yezandla eyi-10 yezingane zesikole sabaqalayo
Imisebenzi yezandla ezi-5 yokwenza ngezikhonkwane zezingubo zokhuni